मधुमेह भएकाले केरा खान हुन्छ ? - Birgunj Sanjalमधुमेह भएकाले केरा खान हुन्छ ? - Birgunj Sanjalमधुमेह भएकाले केरा खान हुन्छ ? - Birgunj Sanjal
३० आश्विन २०७७, शुक्रबार २०:०२
वीरगंज | मधुमेह भएको मानिसले आफ्नो आहारामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । जथाभावी खाने गरेमा मधुमेह अनियन्त्रित भएर गम्भीर शारीरिक समस्या आउन सक्छ । विशेषगरी कार्बोहाइड्रेट भएका खाद्यवस्तु खाँदा विचार पु¥याउनु आवश्यक छ । यसमा अन्न, तरकारी मात्र होइन फलफूल पनि पर्छन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा केरामा स्याच्युरेटेड चिल्लो, सोडियम र कोलेस्टेरोल निकै कम हुन्छ ।
केरामा शरीरलाई अत्यावश्यक पोषक तत्व भिटामिन बी ६, पोटासियम र म्याग्निजको राम्रो संयोजन हुनेगर्छ । तथापि केही चिकित्सकले मधुमेह रोगीलाई केरा खाँदा विचार गर्न सुझाव दिन्छन् किनभने केरामा क्यालोरीको उच्च मात्रा हुन्छ ।